Ubuntu: Maonero angu pane ichi kugovera | Kubva kuLinux
Ubuntu: Maonero angu pane ichi kugovera
Ubuntu hapana mubvunzo kugovera kunokonzera kukakavara kukuru pakati pevashandisi ve GNU / Linux. Vamwe vanonamata, vamwe vanovenga .. Zvikonzero? Heano mimwe mienzaniso:
Ubuntu mabhenefiti kubva kubasa rakagadzirwa nechikwata che Debian uye haina mubairo wekuedza.
Ubuntu wedzera mapakeji anongotsigirwa pane ino distro uye kwete pane yemubereki distro (Debian).
Ubuntu ane kuseri kwekambani uye murume (Shuttleworth) iyo inotarisira kubatsirwa kutanga uye kunyanya.
Ubuntu haina maonero evashandisi vayo uye inoisa shanduko dzayo sekunge iWindows kana OS X.
Ubuntu haina kugadzikana, ivo vanongonetsekana nezve kuivhura yega mwedzi mitanhatu kuti mapakeji avo anoshanda kana kwete.
Ubuntu kuteedzera ku OS X.
Zvisinei, idzi ndidzo dzimwe dzenharo dzandinosangana nadzo zuva rega rega uye dzadzinoita Ubuntu kugoverwa kuvengwa mukati meNharaunda ye GNU / Linux.
Kana ndichifanira kutaura chokwadi, handibvumirane nevamwe vacho, kunyangwe izvo zvichitsamira padanho rekutarisa kwaunotarisa kwauri. Ini handisi kuti mupiro uye kutsiva kwe Ubuntu toward Debian hazvina maturo, asi ichokwadi kuti ivo vanogona kupa zvakanyanya kupfuura izvo zvavanopa parizvino. Uye kana vakadaro, ini handina kunzwa.
Icho chokwadi chekuti ivo vanowedzera mapakeji chete ekugovera uku (Kubatana semuenzaniso), kana kunyangwe, kuti vane maPPA avo uye kuti mamwe haashande Debian, hazviiti kuti vawedzere kuipa kana kuve nani kupfuura chero ani zvake. Ehe Debian (kana kumwe kugovera) hazvienderane nemamwe mapakeji kana kwavo kutsamira, zvinongova nekuti havadi.
Sei? Zvakanaka, nekuti kazhinji, pasuru yega yega mune yekuchengetera ine kodhi yekodhi, uye neizvi, zvakaringana kumwe kugovera kutora mamwe mafomu anongowanikwa mu Ubuntu.
Ndakagara ndichizvibvunza mubvunzo mumwe chete, chii chakanetsa Maka Shuttleworth unoda kupora ne Ubuntu y CanonicalImarii yawakaisa kubva muhomwe yako kuti ugadzire kugovera uye kambani zvakateerana? Ini chokwadi handina kumboona chero chinhu chandakaita Maka Shuttleworth o Ubuntu iyo inodarika miganho yetsika kana kutyora rusununguko rwune rweOpen Source.
Kuti Nharaunda ye Ubuntu Haisi iyo chaiyo inoteererwa ichokwadi, asi iwe unofanirwa kushandisa kusava nehanya uye kutora mativi ese ari maviri. Zvinoita here kufadza mamirioni evashandisi kutenderera pasirese? Handifungi kuti izvi zvinogoneka.
Kana ndikafunga Ubuntu unofanirwa kuve neyakagadzikana kuburitsa kutenderera, kana chimwewo chinhu chakafanana nechaunacho Debian. Kugadzira software, kupuruzira mashandiro ayo, kugadzirisa zvikanganiso zvayo uye kuisiya 100% ichishanda yega yega mwedzi mitanhatu uye nepamusoro pewachi, handifunge kuti itsika yakanaka. Izvi zvinoita Ubuntu Inogona kuve isina kugadzikana zvechokwadi, kunyangwe hongu, zvirinani kwandiri panguva yandaishandisa, haina kumbondipa chero chakakomba kukanganisa kuti ndivige mumatumbu eangu hard drive.
Chii Ubuntu kopi kuOS X? Chokwadi, zvakawanda zvakagadzirwa mukugadzirwa kwe kubatana Iwo chaiwo kopi ye OS X, kunyangwe kubva kune yakatangira InoteveraStep Uye izvo? Dambudziko nderei? Pane zvinopesana, vashandisi vazhinji vanoda OS X uye havakwanise kuzvitenga, vanogona kunzwa vakasununguka kuva nechimwe chinhu chakafanana uye chemahara, kana zvingangoita shanduko ku Linux yevashandisi ve OS X.
Zvakaipa kana zvakanaka, Ubuntu yakaratidza pamberi uye shure munhoroondo ye GNU / Linux. Kunyangwe vachizvida kana kwete, isu tinofanirwa kubvuma izvo nekuda kwekushambadzira kwayo, uye nehungwaru hwese hwekugadzira kugovera kuri nyore uye nyore kushandisa, zviuru zvevashandisi zvakasvika kekutanga GNU / Linux, kunyangwe gare gare ivo vakamhanya kunopotera kune kumwe kugovera.
Handishandisi Ubuntu kana zvigadzirwa zvacho nekuda kwekuti ndinogadzikana nazvo Debian, asi ini ndiri mumwe wevaya vanofunga izvozvo, sa Fedora, yakavhurikaSUSE, Archlinux…, Kuparadzirwa kukuru.
Izvo zvandisingabvumane nazvo nedzimwe sarudzo dzakaitwa nevagadziri vadzo? Chii chandinofunga kubatana Haisi iro rakanakisa goko kunze uko? Ichokwadi, asi hapana chinhu mukati menyika Open Source iyo haina mhinduro kana imwe nzira.
Zvisinei, pane zvishoma zvasara zvekutanga kwe Ubuntu 12.10 Uye kana iwe uri mumwe wevashandisi vanoda kugoverwa zvine hushamwari, ndinokurudzira kuti utarise. Nguva dzose yeuka kuti une dzimwe nzira: Linux Mint, SolusOS, PCLinuxOS, Debian, vhuraSUSE… Etc.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » Kugoverwa » Ubuntu: Maonero angu pane ichi kugovera
Ini ndiri muDebianite kusvika kurufu, asi isu tinofanirwa kuziva kuti Ubuntu inzira yakakwana yevanhu vanoda kuziva vakasungirirwa muWindows world. Sekutaura kwaStallman, Ubuntu handicho chinangwa, inongova nhanho huru munzira kwayo.
Kwete saizvozvo. Ubuntu nhasi ndeimwe yesarudzo dzinoverengeka dzeavo vashandisi uye hazvina basa kutaura kuti ndiyo imwe sarudzo yakanaka.
Vashandisi veWindows vanoda kushandura software yemahara vanowanzoda chimwe chinhu chakafanana chaizvo neWindows zvinoonekwa kuitira kuti vazive, asi vasinganetseke nezvikanganiso zvemukati uye malware.
Kazhinji, vanhu vazhinji vanonyanya kurohwa neKDE pakutanga kuona nekuti yakafanana neWindows 7 kupfuura dzimwe nharaunda, uyezve, vashandisi ivavo havazive chinonzi graphical nharaunda, vanofunga kuti izvo zvavanoona mukati mayo desktop iyo inoshanda system pachayo.
Ini ndinobvumirana nekomendi yako, ini ndinoisa Ubuntu kushamwari dzangu dzese uye ndinogara ndichiwana mumwe munhu kuti ashandise seiyo huru OS, inogara ichishanda kekutanga uye zviri nyore kwandiri kuti ndipe kuraira uye kugadzirisa. Mune yangu nyaya, ini ndiri mushandisi akatendeka weprojekti chakra. ^ ___ ^
Zvakanyanya maererano neshoko!
Ini ndinoshandisa Kubatana uye ndinonyatsoifarira. Ndakaedza dzimwe nharaunda asi ini ndinoona iyi ichikurumidza (kwete yakajeka) uye inoshanda. Chero bedzi iwe uchigona kuisa dzimwe nharaunda kuUbuntu, zvakajairika kuti ivo vagadzire imwe nekutadza, uye ini handizovatsoropodza kana vakaisarudza.
Mhoroi, ndanga ndiri mushandisi weUbuntu kwemakore mashoma kusvika mwedzi mishoma yapfuura ndakasvetukira kuLinux Mint Debian Edition (LMDE) uyezve Debian, kufunga kuti ndichagara mairi nekusingaperi.
Pane zvinhu zvishoma zvandisingabvumirani newe. Kutanga, kuda kuteedzera OS X kana Windows hachisi chinhu chakashata, uyezve, Ubuntu yakabatsira kufambisa Linux kupfuura mamwe akawanda magadzirirwo echinyakare kusanganisira amai kugovera, Debian. Tinogona kuchida zvakanyanya kana zvishoma, asi ngatitendesei tinoda kuti LInux inoshandiswa uye ine rutsigiro rwakawanda uye rwakawanda padanho revashandisi.
Chechipiri, iyo Cannonical ikambani uye zvainoda mabhenefiti, haina kushata, asi, nekuti inongoburitsa mabhenefiti kana ikakwanisa kufarira vashandisi vakawanda. Ichokwadi kuti izvi hazvienderane nekunzwikwa kushoma kwenzanga yeUbuntu, ndinovimba izvi zvichagadziriswa, nekuti ini ndinofunga haisiyo nzira kwayo.
Kune vamwe vese, ichokwadi kuti kunyangwe ukajaira Kubatana, ini handina kumbozvifarira, chii chimwe, ikozvino ini ndine gnome3 uye gnome-goko rayo uye ndinoifarira zvirinani kupfuura Kubatana, kunyangwe ivo vasina kufanana .
Kwazisai uye kunze kwemapoinzi maviri aya, chokwadi ndechekuti Ubuntu ine zvayakanakira nezvayakaipira izvo tinotenderana kana zvishoma.
Zvakanaka, zvinoratidzika kwandiri kuti ndakanga ndisinganzwisise zvakanaka muchinyorwa, nekuti hapana pandambotaura kuti ndinozviona zvakashata kuti Ubuntu inoteedzera OS X uye kuti Canonical ine mabhenefiti, kana kana?
Ini ndinofunga Israelem haana kuverenga chinyorwa chose asi chete mapoinzi awakapa pakutanga. Uye akawana mhedziso zvichibva pane izvo chete. Ini ndinokukoka iwe kuti uverenge zvakazara kuitira kuti iwe uone kuti yako nharo haina musoro.
Zvamunotaura zvakafanana nezviri pamusoro.
Pane akati wandei mapoinzi anokwezva kutarisisa.
Pfungwa # 3: Canonical ikambani uye sekambani inofanirwa kurarama neimwe nzira, pane chakanganisika here?
Pfungwa # 4 Ini ndaizofunga nezvazvo.Sekambani vanofanirwa kuve nerudzi rwebhodhi revatungamiriri uye vane basa rekuita sarudzo, ndinofunga vanofanirwa kutora mamwe mazano Uye unoziva sei kuti Apple naWin havazive vashandisi vavo vanofunga? Une vaunotaura navo here?
Pfungwa 5 # Hapana chekutaura 100% vanobvuma.
Yekupedzisira poindi .Ubuntu = Winbuntu. Tsanangura zviri nani ndapota.
Chekutanga pane zvese, aya maonero ekuona haasi angu, asi iwo andinonzwa zuva nezuva, izvo zvinotungamira kupindura mibvunzo yako inotevera:
- Ini handizive uye handifarire kuti Apple kana Microsoft inoteerera kune vashandisi, uye handina hukama navo.
- Ubuntu = Winbuntu chinhu chinotaurwa nevashandisi vazhinji, ndiko kuti, Ubuntu ndiyo OpenSource Windows, yemamwe mapoinzi ataurwa pamusoro.
Elav, ndinofunga maumbirwo epositi anga asiri akakodzera kwazvo. Sezvineiwo vanhu vanongo verenga iwo makomendi uye vanofunga kuti ndiwo maonero ako nezvazvo, uye vanosvetuka kuti vataure vasina kuverenga chikamu chasara chechinyorwa.
Ichokwadi kuti isu tinogona kuve zvakanyanya kana zvishoma muchibvumirano nezvisarudzo zveCanonical, asi ichokwadi kuti vazhinji vedu vakapinda munyika kuburikidza nazvo (ndiyo yekutanga distro yandakanyatsoshandisa, ndisati ndapfuura akati wandei asi ivo zvimwe havana ndivimbise kana ini ndakanga ndisingakwanise kuigadzirisa)
Edgar J. Portillo akadaro
Zvinonakidza ... Ini ndiri mumwe wevakawanda vakatanga muGNU / Linux nekuda kweUbuntu, nekuti mune yangu institute (mune isingazivikanwe kona yeHonduras) chimwe chinhu chinoshamisa chinoitika, ivo vanotenda kuti Ubuntu iLinux yese, Icho chiri chechimwe chinhu here? (Hakusi kusaziva, Microsphtonia) ... Kwandiri Ubuntu iguru OS, kwete yakanakisa kana yakaipa, kunyangwe Shuttleworth yakamisikidzwa mumakushe zvirinani inotipa chiitiko ichi chakanaka ...
Ini pachangu, zvinondiita kuti ndinetseke kuona Ubuntu hwangu hunodiwa huchibatwa senge mahwindo XD, apo iye ndiye aindiratidza nzira yekuLinux uye nerusununguko irworwo ... Zvakaringana kumushandi wekupedzisira anoteerera mimhanzi. uye anotarisa mafirimu pasina kuve nyanzvi yegeek, handiti? ...
Pindura Edgar J. Portillo
Ini handina kutanga ne ubuntu, yaive ne linuxmint Elyssa 5, sezvo ini ndaisatombo bhura iyo cd, asi ndinofanira kubvuma kuti pasina ubuntu pangadai pasina linuxmint uye nekudaro ndingadai ndisina kumbopinda linux, saka Ubuntu hausi mutsvene kuzvipira kwangu asi iye asipo kwaisazove neiyo huru distro iyo yakanditanga uye kusvika nhasi handikwanisi kutanga ubuntu dvd saka ndakaedza nekubuntu uye lubuntu uye zvaive zvakanaka kwandiri asi ini ndaigara ndichidzokera kumindi uye ikozvino izvo zvandinoziva zvakawanda ini handisi ini ndakaparadzaniswa nemudiwa wangu Debian.
Hongu, zvakanaka ndanga ndine matambudziko mazhinji neiyo Ubuntu kuisirwa asi haha ​​handizive kuti sei ndisina kusiya ... ini ndaida kuzviedza, zvinoita sengano muGNU / Linux, kuti ndipe zita re siren rinokonzeresa kuti urishandise, handiti? ... Thanks Ubuntu!
Ini ndakashandisa Ubuntu kwenguva yakareba uye ndakachinjira kuDebian kuyedza nyaya yekudzikama uye ini ndakaramba ndichienderera neUbuntu sechipiri kugovera, asi mushure meUbatanidzwa ndakadzinga zvachose Ubuntu kubva pc yangu.
ubuntu ndizvo zvazviri, kana chiri chokwadi kuti haina kugadzikana asi neLTS iri kufamba mushe, kubatana kwakanaka varipo asi kune avo vasingazvifarire unogona kuisa gnome classic kana gnome shell muna 12.04, kana zvimwe pane kubuntu kana lubuntu, kunyangwe xubuntu, ese anoshanda zvikuru, ini ndine lubuntu palaptop yangu yekare uye ndakaidzosa kuupenyu mushure memawindo, ndinonzwisisa kuti vanhu vazhinji havade Ubuntu, ndinonzwisisa kuti sei vamwe vachichida , asi chokwadi ndechekuti Ubuntu Icho chiri pamberi uye shure mune yakavhurwa sosi, uye kana iwe uchida kukunda pasi desktop zvakanyanya, iyo nzira ndiyo yakatarwa neubuntu, kune zvese zvimwe zviri mumawindows.
Mahara Gaucho akadaro
Isu tinoti sei mumunda: "Ubuntu akarova dendere rerunyanga."
Pindura Gaucho Kusununguka
Ndine zano shoma reLinux uye ndinofunga Ubuntu yaita kuti zvinhu zvive nyore kune avo vakaita seni (mamirioni). Zvirinani kutanga zvakanaka. Gare gare, kana vanhu vachizvisimbisa pachavo muchirongwa ichi, vanozotoedza dzimwe "flavour".
Parizvino Xubuntu yangu inoshanda, uye iri Linux inoshanda chaizvo kune izvo zvandinoda. Ndicho chakanyanya kukosha.
Uye ini ndinoona iri nyore kwazvo uye intuitive kushandisa! Izvo hazvina kukosha here?
edza kuvhuraSUSE uye Yast2 yako kana Mageia neMagea yako Yekutonga Center.
Ubuntu haina chishandiso chinosvika kune maviri eaya.
Iwe une chero zano here kuti zvakadii zvakandibhadharira kuisa waini mu openuse?, Mageia ini handina kuyedza, ndinovimba iri intuitive pane kuvhura.
zypper muwaini kana zypper kuisa waini
Kana iwe uchida iyo yekuvandudza vhezheni, wedzera iyo waini repo kubva yast2 (nharaunda repositori) uye wozo chinja waini package package,
Elav, Ubuntu ndiyo imwe yemhinduro kumubvunzo wako yanga iri: Ndeipi nzira yeGNU / Linux yekusvika kumushandisi? Uye zvirokwazvo mhinduro zhinji dzinoita dzokorora, mupfungwa yekuti vazhinji vedu vanotora zvakanyanya Linux ndatenda kuUbuntu, saka ndinotenda nekusingaperi nekuparadzirwa uku. Basa rinoitwa naUbuntu mukuita kuti Linux iwanikwe kune wese munhu, rinoipa zvakanyanya kukosha kupfuura Debian, Arch Linux kana Slackware, nechikonzero, kuti muDistroWatch, Ubuntu inogara iri munzvimbo nhatu dzekutanga, uye izvo hazvisi zvemahara.
Ini handizive chero nzira yekuisa mu linux inodarika apt-tora kuisa xxxx uye iyo inokuwanira zvese zvinoenderana ipfungwa yangu uye kuti ndashandisa akasiyana distro kubva kubuntu ku redhat uye zvayakatora uye suse nezvayo zvinobva
kana pane zvirinani zvirinani
Pindura ku rcm
Ini ndiri mushandisi weUbuntu. Ndanga ndichishandisa Ubuntu kubvira 11.10 yabuda, zvinoreva kuti ndiri mutsva kune Linux nyika. Pasinei neizvi, ndakapedza zvakazara munguva yangu yekusara ndichidzidza kumwe kugovera nekuvaedza. Ichokwadi kuti mamwe haashande sezvaanofanirwa nenzira chaiyo asi ini ndakazadzisa chinangwa changu, chinova chekuvaedza uye kuona zvandiri kufarira pane imwe neimwe Ini ndinoda Ubuntu zvakanyanya. Zviri "mushandisi-zvine hushamwari", Kubatana kunoita kuti hupenyu hwako huve nyore kwazvo kana uchitsvaga mafaera, zvirongwa, zvinyorwa, nezvimwe, uye ivo vachiwanzo kuita "kugadzirisa" kwezvirongwa. Ndosaka ndichisiyana nemamwe mapoinzi ataurwa pakutanga. Hongu, yega yega mwedzi mitanhatu Canonical inopesana newachi kuti ibudise vhezheni itsva yekuparadzirwa kwayo, Ubuntu. Izvo hazvireve kuti izvo zvirongwa uye zvinoshandiswa izvo zvatove zviripo zvinochengetedzwa, kuvandudzwa, nezvimwe. Ndakazviona. Vhiki nevhiki pane zvakawanda zvinogadziriswazve zvekushandisa kwandinoshandisa. Zvakareruka sekuwedzera zvinyorwa zvako kuti uve ne "zvigadziriso" zvepamutemo. Zviripachena, ivo vanotozviziva izvo.
Kana iri Shell, ini ndinovenga GNOME Shell. Ini ndinoda iyo GNOME Kudonha kana yeClassic, inova iyo yandinoshandisa uye kuigadzirisa chero ini yandinoda. Kana zviri zvinoita senge OSX, hapazi here yakawanda yeVERY Windows-senge kugoverwa? Ini handikwanise kumira paWindows "tarisa", uye ndeyako chaizvo. Ndakagara ndichishandisa Windows yebasa asi ini ndinovenga desktop.
Canonical… haina Redhat kuita zvakafanana? Iyo inobatsira kubva mukutsigirwa kwayo. Iyo GNU / Linux nharaunda, kana vachifanira kutenda nechimwe chinhu chiri kumakambani akaita saRedhat neCanonical avo vakazvipa ivo pachavo basa rekusimudzira masevhisi / zvigadzirwa zvavo. Mushure mezvose, ndeipi IT isiri kuzobhadharisa masevhisi ayo, ingave yeLinux OS, Windows, Mac, Unix, nezvimwe? Uyo anoshanda anofanira kunge aine chaanodyawo. Nhasi, kana vashandisi vekuparadzira kweLinux vachifanira kudada nechimwe chinhu, ndiko kuziva kwepasirese uko makambani aya akatipa izvo zvisina kubuda kunze kweiyo Open Source uzivi, sekutaura kwemunyori wenyaya ino.
Kutendeseka, ini handina kumbobvira ndanzwisisa kupokana pakati pevashandisi vekusiyana kwakasiyana, chero chikonzero. Pakupera kwemugwagwa, isu tese tinobva munharaunda imwechete uye mubatanidzwa wenharaunda yese inosarudzika pane kusiyanisa. Kusiyanisa ndiko kwakatsigira kukura kwezvikamu zvakasiyana kwemakore mazhinji. Uye ini handisi kutaura nezve kusiyanisa kuripo sezvo paine zvakawanda zvekugovera, ndiko kushoma kwazvo. Kune kuravira, iwo mavara. Ndiri kutaura nezve kusiyaniswa kwekuti "iwe unoshandisa Ubuntu", "Ini ndinoshandisa Arch", "Ndinovenga Kubatana", "KDE iri nani" kana chero maonero aunayo. Ndozvandinofunga zvisina kunaka munharaunda. Kunyangwe iwo mirairo mune kumwe kugovera yakafanana. Zvinenge zvese zvakafanana, izvo zvinoshanduka kutaridzika uye zvimwe zvinhu, senge zvataurwa kuti Ubuntu inoburitsa zvimwe zvinhu zveUbuntu chete. Nekudaro, pane nzira dzekuisa nadzo mune kumwe kugovera, sekutaura kwemunyori.
Izvi zvatoita sesungano.
Nehurombo iwe paunotora nguva yakawanda iwe uchaona kuti nyonganiso iri pakati pevashandisi vekugovera uye mapurojekiti inyonganiso uye isingadzoreki nyaya kupfuura iyoyo, uye kuti kune vanhu vazhinji hapana kuyananiswa chero. Zvisinei, zvinopesana nekukakavadzana kweavo zvine zvikonzero zvakanaka uye zvakaoma-kugadzirisa zvikonzero izvo zvisina kunaka kuregeredza. Chinhu chega chandinobvunza kuvanhu ndechekuti ivo vanoziva nzira yekukakavadzana nekusagadzikana kwavo vasina hunhu (hondo tsvene) nekuti ndizvo zvinokuvadza nyika yemahara software.
Ini ndinonzwisisa kukakavara kwakawanda, kunyanya kana zvasvika panyaya yechinhu chemahara software uye chisiri, iyo Ubuntu haisi yemahara distro, nezvimwe. Pfungwa yandinotaura ndeyekuti nyika yachinja uye nharaunda yeGNU / Linux, pachinzvimbo chekukakavadzana netiki, inofanira kusangana nekuti parutivi, hapana chinowanikwa. Hauna kuona here mafirimu asingazivikanwe apo munhu wese anogara achifunga kupatsanura uye munhu wese anoguma afa? Ndozvandiri kureva. Nyika ino yemahara software yakanyanya kuomarara kupfuura zvandaigona kufungidzira, asi zvakazara, ndinofunga kuti mubatanidzwa pakati pedu tese ndiwo uchave unonyanya kuita. Uye ini ndinodzokorora, handireve madistros akasiyana aripo, ndinoreva mubatanidzwa wenharaunda saizvozvo. Ini ndinofunga kuti akasiyana distros aripo akanaka kwazvo uye akasiyana akanaka. Izvo zvakasiyana mukufunga kwevanhu vakasiyana, maonero, zvakare zvakanaka, nekuti, iwe unogona kufungidzira nyika apo munhu wese anofunga zvakafanana? Zvinenge zvisinganakidze. Asi mukati me mutsauko unogona kuvapo mumaonero, vashandisi vekuparadzira chero kweGNU / Linux vane zvakawanda zvakafanana pane mutsauko.
Ndo zvandiri kutaura nezvazvo, nekuti dzimwe nguva tichaona kuti kuda kuunza pamwechete mamwe mapoka evashandisi kwakafanana nekupinda muhomwe yekatsi, kana zvakanyanya, sekunge kupinda mudziva repiranha risina kudya mumwedzi. Vazhinji vedu takasiya basa uye isu tinongokumbira isu isu kupokana misiyano yavo nerunyararo rukuru.
Ndizvozvo. Asi ini ndaisazotanga kutsvaga mubatanidzwa wemumwe munhu, ndaizotanga neni. Ini pachangu ndinobvuma kuti ndine misiyano yandinofanira kuregeredza, maonero akasiyana asi izvo hazvindibata Ipapo ini ndaizotsvaga vashandisi vakafanana neni. Chero ani zvake asingade kuve chikamu chenharaunda iyoyo anogona kunzwisiswa zvizere asi nharaunda yakadaro inofanira kuvapo. Ehe ini handigone kuchinja nyika ... ndinogona here?
Darko, ndinonyatsoda iwo mufungo, wakanaka chaizvo. Asi kunyangwe tikatsvaga vashandisi vanofunga zvakafanana nesu, tinoumba nharaunda sekutaura kwenyu uye tinobatsira vanhu, asi kamwe-kamwe tinoona kuti vamwe vakaumbawo avo, vakawandisa, vanoti vane chokwadi, izvo isu hatipe chero chinhu uye ivo vanouya kwatiri kana zvirinani pese pavanogona kutaura zvakaipa ivo vanozviita, kuitira kuti vasarambe vakanyarara tinovapindura nekumisikidza pakarepo murwi wehondo, saka vashandisi vatsva vanosvika voona nyonganiso iyo yakaiswa uye inotora mufananidzo unotyisa wenyika yese yeLinux, vamwe vanobva uye yeavo vakasara, vazhinji vanopinda muhondo dzesingaperi dzitsvene. Ndiyo nhoroondo yenharaunda dzatichagara tichiona. Zvinosara kutora bato murunyararo.
Warevesa. Taidzokera kuchinhu chimwe chete kakawanda. Zvakanaka, sezvavanotaura pachitsuwa changu chePR "ndichiri zvangu." Ini ndinotarisa kwese kwese, kwandinogona kuwana rubatsiro uye / kana mhinduro uye kana ndichigona kubatsira chero munhu anozvida nekuti ruzivo rudiki rwandainaro harusi rwangu. Zvakare, rusununguko ndezve izvo, kuva nepfungwa dzakavhurika kune zvinokwanisika kunyangwe izvo zvingangove zvisiri izvo zvaunazvo mupfungwa.
Kutenda ubuntu ini ndakatanga mu linux (senge zhinji) Iyo yandinonyatsokoshesa, ini ndinotova neiyo kana imwe CD (pavakavatumira mahara: D) Ndinoyeuka kuti iyo 7.10 nyaya ndiyo yandakadanana nayo, kusvikira nhasi tarisa kwazvo Nice iyo theme yemunhu uye maorenji mifananidzo, izvo zvandisingatombo farire ndeyekumanikidza vhezheniitis, (kwete chete Ubuntu, asi mazhinji emahara mune zvese.) uye nekudaro, mapakeji ayo asina rutsigiro rweimwe shanduro. ikozvino ini ndinoshandisa arch, asi ndinofanira kutenda ubuntu nekundiswededza padyo nenyika ye linux.
Ubuntu mugove wakanaka kutanga neLinux kana kuve neyakakwana uye nyore kushandisa mashandiro, pasina kuomesa hupenyu hwako zvisina basa. Ndakatanga Ubuntu kumashure muna2008 uye Kubatana kwake kwakakwanisa kundityisidzira kuMint, Chakra uyezve neArch. Mukufunga zvekare, ndinomutenda nekundidzidzisa izvo zvinokwanisa kuitwa neLinux, zviri nyore, runako rwekunze.
Saka kutaura, Ubuntu ndeimwe ye "madhoo" eimba, mukova; Kana iwe uri mumwe wevaya vanofarira zvivakwa, iwe uchazoda kuona yepasi, denga uye ongorora yega yega kamuri inch ne inchi. Kana iyo nguva ikasvika, kana ikasvika, mushandisi anowanzo svetukira kune mamwe ma distros ... kana kutsvaga imwe ine musuwo weruvara rwakasiyana. Asi, muchidimbu, ichiri chikamu cheiyo hombe penguin imba.
Ubuntu yakagovaniswa zvakanaka seimwewo. Kwete zvakare hapana zvishoma. Nemhosho uye kubudirira.
Ndokusaka kunyatso kukoshesa iko kukanganisa.
Ndokusaka kurerutsa iri zvakare kukanganisa.
Ini ndiri mushandisi weUbuntu kunyangwe ini ndakaedza uye ndichienderera mberi kuyedza kumwe kugovera. Ndiri murudo ne linux mune zvese. Ndakafarira chinyorwa chenyu. Ndinofunga iwe wakanangana nechinangwa chaicho. Wataura pane izvo zvinowanzo taurwa pamusoro pake uye wanyora yako maonero. Kwandiri Kubatana kunonyatsogadzikana kana wajaira. Ini ndaive nerombo rakanaka kuishandisa kekutanga pane laptop saka izvo zvinondipa mukana. Pane pc zvinogona kunge zvakatora nguva yakareba kuti uishandise. Ubuntu haisiriyo yoga kugoverwa kunouya neiyo default desktop. Kugoverwa kwese kwese kuve nako uye hakuna kuomarara zvachose kushandisa gnome, semuenzaniso, yekare uye yazvino vhezheni uye ivo vanonzi negao yekomputa. Kune rimwe divi kune kubuntu, lubuntu, xubuntu nezvimwe, nezvimwewo izvo zvakafanana Ubuntu iine rakasiyana desktop. Ini ndinofunga izvo zvinoita kuti zvinhu zvive nyore kwazvo. Pakupedzisira Ubuntu haisiriyo yega uye ndinofunga haisiyo yakanyanya kunaka. Vashandisi veLinux vanofanirwa, uye isu tese tinobatanidzwa, mira kuve "vadiki" veguta uye ibva mugore. A novice linux mushandisi anogara achitya kubvunza nezve zvisina basa izvo zvavanowanzo pindura uye pano mune zvakataurwa iwe urikuwona yakawanda yeiyi futi. Ini ndinoshandisa Ubuntu nekuti ndinoiona yakanaka, yakagadzikana uye inoenderana zvakakwana kune zvandinoda uye ndinogona kukuvimbisa kuti haina chekuita zvachose neWindows uye zvishoma neIOS, zviri zvimwe ndinofunga iWindows Vista, Windows 7 uye ndinofungidzira kuti misere ndiyo inonyara kuteedzera zvakawanda zveLinux zvinhu (ndapota usandiuraye nekuda kwenyaya iyi):
Ini ndinobvumirana neyekare mameseji uye nezvimwe zvinhu zviri muchinyorwa.
Icho CHIMWE distro ... ndiani anoda kuishandisa uye ndiani asingadi ...
Ndine pc yangu yebasa (kudzamara ndawana nguva yekuisazve uye kuibvisa), ndaive nayo pama pcs mazhinji pamberi.
Iye zvino ini ndoda fedora, sabayon kana arch.
Izvo zvinoita senge zvisiri kwandiri ishanduro yega yega mwedzi mitanhatu ...
Ivo vanofanirwa kuita 1 pagore uye izvo zvigadziriso zvinofanirwa kunge zvichitenderedza kana semi kuumburuka kwe "nhau" dzavanoda kuita mukubatana zvinogoneka pasina kudzoreredza vhezheni nyowani.
Ndine maonero akaumbwa zvine chekuita neBuntu; uye imhaka yekuti Canonical inofanirwa kuzivikanwa nekuwana nzira yekupedza uko Linux yakanga isati yambopinda: mudzimba nemumachina eanowanzo shandisa; uye nekudaro, kunyangwe isiri yangu yekufarira distro, ini ndinofunga kuti inofanirwa kutsigirwa.
Ndine kushoropodza kwakakomba zvakare, semuenzaniso takananga kuLTS yazvino, iyo inoitwa pane 3.2 kernel, kuti zvirinani pane yangu laptop inoshanda zvinotyisa, uye kuti nezvose zvayakagadzira kuti iite kuti inyatsoteerera inongodziya chete. processor senge grill, uye fan yacho haimire kuita ruzha. Zvakanaka, hongu, unogona kuisa 3.5, sezvandakaita, uye neizvozvo yakamira kudziya, asi mukufamba kwenguva Ubuntu 12.04 inotanga kupunzika uye inogara ichikukumbira iwe "kudzikisira" kuburikidza neyekuvandudza maneja. Kwandiri, vangadai vakashanda zvakanyanya pane iyo LTS vasati vaiburitsa uye vakamirira chinguva kuti vakwanise kusanganisira kernel yakagadziriswa.
Sezvo @ sieg84 ichiti kumusoro uko, kune ma distros nevanoisa uye mamaneja zvakanyanya kutungamira kune wekupedzisira mushandisi; izvo zvandaizopa kuti ndivhureSUSE Yast2 mune wangu anodikanwa Fedora, neayo angave ari 98% akakwana.
Zvisinei, ingori pfungwa.
Ubuntu yaive yangu yepamutemo gedhi kuLinux nyika. uye ndakaishandisa kwenguva yakareba (kubva pa8.04 kusvika 10.10, iyo yekupedzisira hapana mubvunzo ndiyo yakandinakira). Ndakarega kuishandisa nekuda kwezvikonzero zvakajairika pakati pevamwe venyu: Ini ndaisada Kubatana uye nemitemo mitsva yeCanonical zvishoma kudaro, saka ndakatanga kutarisa kumwe kunhu. Uye kunyangwe ini ndirikufara mune yangu yazvino distro, handigone kuramba kuti Ubuntu yaindibatsira kwandiri sekudzidza kushandisa mamwe ma distros. Chimwe chinhu chandaifanirwa kuratidza ndechekuti pese pandaive nekusahadzika, ndaishivirira uye nekukurumidza ndakatariswa mumaforamu emapeji mazhinji akapihwa Ubuntu, izvo zvandisingakwanise kutaura nezve mamwe ma distros. Ini ndinofunga ndicho chiyeuchidzo chakanakisa chandinacho chekutaura distro uye chimwe chezvikonzero chandakasarudzira Chakra.
Pakubuda Ubuntu kupera kwa2004 (muna Gumiguru kunyatso kutaura) ini ndanga ndichishandisa SUSE Linux (openSUSE yaisavapo ipapo) 9.1 PE uye ndaida chaizvo asi ndakanzwa kudiwa kwekuongorora gungwa uye pakauya Ubuntu kunze ndakafunga kuishandisa. Ichokwadi kusvika kuchikamu 7.10, kubva pandinoona ini Cannonical naVaShuttleworth vaifamba kumberi vachimhanya. Muchokwadi ini ndaishandisa mushanduro dzese dzeUbuntu kusvika pa7.10 nekuti aitevera aive, mumaonero angu, kudzoka shure nekuti zvinhu zvakawanda zvakashanda mushanduro dzapamberi zvaisashanda mu8.04 LTS. Ndipo pandakazodzokera kuSUSE ndobva ndavhuraSUSE yandaive nayo kwegore rimwe ndikazoisiya kuMint Debian Edition uyezve kuArch Linux inova iyo yandinoshandisa izvozvi.
Tinofanira kubvuma chimwe chinhu kuna Mr. Shuttleworth uye ndeyekuti kambani yake uye chiratidzo (mukutanga kwayo) kwaive kuisa Linux neUbuntu patafura uye kuti yaifungidzirwa senzira yakakomba uye yakavimbika kune Windows neMacOS. Ehezve, Cannonical ibhizinesi, asi ini ndinofunga ivo vashaya chiono icho Red Hat neNovell ine SUSE Linux yakambofungidzirwa. Aya makambani ekupedzisira aratidza kuti Linux mukwikwidzi wechokwadi wehuremu uye akaita mari yakanaka, zvekuti vane hupfumi hwekutsigira mapurojekiti akavhurika uye ndiwo hwaro hwezvinhu zvavanobhadhara (nzwisisa Fedora uye vhuraSUSE).
Nzira yakatorwa naCannonical uye chiono chaVaShuttleworth chingave kana chingave chisina kuvhurika kushoropodzwa, asi tichifunga kuti iye muzvinabhizimusi uye achitarisa mafambiro azvino, ndinofunga ari kuyedza kugadzira ecosystem zvakanyanya seApple, ine Ubuntu paPC uye Android pane nharembozha, ine chikamu chekubatanidza chinonongedzera kune imwecheteyo yeIOS neMacOS.
Ndiani anoziva zvichaitika uye chii chichava mhedzisiro inogona kuve neiyi, asi sekutaura kwandakamboita mune dzimwe nzvimbo dzeichi blog, Apple neMicrosoft vari kuvhara denderedzwa renharaunda yavo uye zvirinani kana zvakaipa Ubuntu (Cannonical chaizvo) iri kucheka ibwe kugadzira nzvimbo yekuve neimwe nzira kune aya nharaunda.
Ini handina kunge ndiri mushandisi weUbuntu kwemakore mashanu uye chokwadi ndechekuti Kubatana kunondiita kopi inotyisa yeMacOS desktop (ndiko kuravira kwangu, hapana chimwe chinhu, kutaura zvehunyanzvi ichi chimwewo chinhu), uye icho chinobva muchigadzirwa ichi ndiyo inonyanya kuverengerwa (nzwisisa Mint) ivo zvakare vanoratidza kuti hazvisi zvese huchi pane maflakes.
Ngatitarisirei kuti Mr. Shuttleworth haazvishongedze uye pakupedzisira ozove rimwe Mabasa kana zvakatoipisisa, mumwe Bill Gates.
Zvakanaka kuverenga mhinduro yakangwara seyako. Kune zvimwe ini ndoda kuwedzera izvo pakati pemapoinzi akaitwa pakutanga kwechinyorwa icho chinoratidza kuburitswa zvimwe zvinhu zvinotaurwa nevanhu nezveUbuntu, muchokwadi hazvisi zvese ndezvechokwadi uye zvese hazvisi zvekunyepa, asi kuti vazive kuti ndezvechokwadi sei inogona kunge iri nzira yakanaka yekuvandudza Ubuntu kana vanhu vakuru vari kuitisa vachikushandisa zvakadzama uye nemoyo wese, asi sekutaura kwako mumashoko ako, kana vakazvishongedza nechimwe chinhu, kunyangwe panguva imwecheteyo vamwe vachiti izvi ndizvo zviri kutoitika kubvira chinguva chakapfuura, chichava chokwadi here?
Ndakaedza akawanda ma distros. Kune vazhinji vashandisi seni, vanofara paLinux asi havachadi kushandisa maawa ekugadzirisa matambudziko. Iko hakuna yakakwana distro asi iyo inonyatsokodzera iwe. Ini handidi zvinhu zvakawanda nezveUbuntu, kunyanya kusimuka kwayo kubva kuGnome uye nekubatana Kubatana… .. asi ndiyo inokodzera ini zvakanyanya uye haina kumbondipa matambudziko makuru. Semuenzaniso, ini ndaida kushandisa Fedora apo Kubatana kwakazobuda uye raive dambudziko rimwe mushure meimwe…. uye ini handina kunzwisisa zita rakanaka rekuparadzirwa. Ichokwadi kuti handina kushandisa nguva yakawanda pazviri. Asi ndizvo izvo Ubuntu zvinondiponesa: kuisa uye kushandisa. Munguva pfupi ini ndichashandisa Ubuntu Gnome Shell Remix uye mune ramangwana iro distro rinoburitswa neGnome. Neyangu fungidziro Gnome irikuita basa rakakura, zvishoma nezvishoma asi zvirokwazvo uye iri kuzadzisa kuzivikanwa kunoenderana nekureruka uye kurerutsa uchiri kuunza yazvino. Kana iwe ukawana hwaro senge Ubuntu / Debian kana hwakavakirwa paUbuntu, kugadzirisa zvikanganiso zvako…. yangu yakanaka. Kugoverwa kwakawanda kwetsika senge Arch ini handina chokwadi nesimba rayo…. Asi sekutaura kwangu, yanga yave nguva yakareba kubva chimwe chinhu chaitika. Ubuntu ine mukurumbira wekupaza…. asi handisati ndambova nenjodzi huru saka handina basa nezvavanotaura. Zvakanyanya kushata nezve Kubatana kuri kusanduka kuita risinganzwisisike hodgepodge.
Ini handibvumirane nenyaya yako. Ini ndinoshandisa xubuntu 12.04 (pakati pemamwe distros) uye ndiyo yakanakisa yandakaedza uye iri LTS.
Pfungwa 1.- Mangani ma distros anobatsirwa nebasa reUbuntu? Zvakawanda.
poindi 2.- Mazhinji distros anoita zvakafanana, mapakeji anongoshanda mune yavo distro.
Pfungwa 3.- Pane kambani kuseri kwayo, asi ini handina kana chandakabhadhara. Ini ndinofunga vazhinji vavandudziri vanotsvaga izvo. Ini ndinoda nharaunda, asi zvirinani ubuntu hairegi chirongwa ichi kamwe kamwe.
poindi 4.- Izvo hazvitore hanya mafungiro evashandisi, ndinovenga Kubatana asi hazvimanikidze chero chinhu, sezvo uchigona kusarudza imwe desktop. Chakra inosiya makumi matatu nematatu haisi yekumanikidza?. Chokwadi uku ndekwechizvino-zvino.
Nongedzo 5.-isina kugadzikana?, Pamwe hongu, asi kubva pane iyo rondedzero iwe yawakapa, akati wandei madistro akandirova pandino gadziridza, iyo parizvino Ubuntu isina kuzviita (zvikanganiso mumapakeji hongu, asi graphical system panguva iyoyo kwete) .
poindi 6.- mangani ma distros makopi ehunhu?, Mazhinji, kusanganisira Mint, iyo isingandipe zvachose.
poindi 7,. Winbuntu. nekuda kweizvi vazhinji vatanga muLinux nyika.
Parizvino Ubuntu hwangu hausati wambondipa matambudziko makuru, kuti iwo mazhinji aunotaura andipa.
Iwe uri kunyatso kusawirirana nemaonero munyori wenyaya asingawirirane nawo, kwete icho chinyorwa chose.
morpheus uri kutaura chokwadi pamwe ndazviratidza zvisizvo. Ini ndinobvumirana kwazvo nemafungiro emunyori wenyaya uye mukusawirirana zvachose nezvisina maturo zvinotaurwa nezveUbuntu.
Nekudaro, dzimwe dzetsananguro dzauchangobva kupa kune iwo mapoinzi dzinopokana senge iwo iwo mapoinzi aunotsoropodza, uye iwe unotokanganisa zvachose basa reimwe distro zvichibva pane imwe sevaya vanokanganisa Ubuntu nekuda kwezvikonzero zvakasiyana.
Asingazivikanwe, tsananguro dzandinopa ndidzo pfungwa dzangu uye nekudaro dzinopokana zvachose, senge chero imwe pfungwa yekuona.
Ini handikanganisi basa reMint, asi ini ndinoremekedza basa rese rinoitwa muLinux, ndinoiisa semuenzaniso kuti kana ukazviisa mune yakaipa chirongwa, hapana chakakwana uye iwe unogona kuwana zvikonzero. unoda.
Platonov, chirevo hachisi chekuwana chakaipa asi kuva akatendeseka. Zvinhu zvakawanda zvinotaurwa nezveUbuntu pamambure manyepo asi zvimwe hazvisi. Kana chimwe chinhu chikave chakakurumbira, nyaya zhinji dzinobuda, asi zvakare zvimwe zvinhu, uye basa reavo vanoda kuti Ubuntu vapihwe kurapwa kwakanaka kujekesa zvinhu, kwete kuzviisa ivo pachavo muchirongwa chisina kunaka nekuregeredza vamwe vari pachinzvimbo chimwe chete. sevaya vanomushora zvisina kunaka.
Verenga chinyorwa chizere.
Ini ndinogona kunzwisisa kuti iwe haudi Ubuntu, ndinogona kunzwisisa kuti iwe haugovane nehuchenjeri hwayo, asi kuti unonyepa semunhu asina maturo kuti tikwanise kusimbisa zvaunotenda zvinondirwarisa.
Ubuntu hunobatsira kubva kubasa rakaitwa nechikwata cheDebian uye haipe mubairo wekuedza. MHOSVA ZVINOTANGA KUTAURA UYE?
Ubuntu inowedzera mapakeji anongotsigirwa pane ino distro uye kwete pamubereki distro (Debian).
Ubuntu ine seri kwekambani uye murume (Shuttleworth) uyo anovavarira kuwana purofiti kutanga uye kunyanya. Kunyepa, HANDI KUZIVA MUNHU WAKABHADZIRA KUSHANDISA UBUNTU, KUSVIRA KUTI VAZOENDA NEMARI NAYO uye mune izvozvi ivo vachabhadhara iyo technical service, kwete iyo software.
Ubuntu haina maonero evashandisi vayo uye inoisa shanduko dzayo sekunge iWindows kana OS X. MHOSI, HAPANA ANOGADZIRA CHINHU, KANA USINGADE CHIMBatanidzwa Une XUBUNTU, LUBUNTU, KUBUNTU UYE IZVOZVI GUBUNTU
Kuti utaure kuti distro inomanikidza iwe kuti ushandise izvo zvinouya zvisati zvaiswa ndeye KUNYEPA, iwe unogona kuisa uye kusunungura chero chaunofunga kuti chiri nyore, unogona kunyange kuita iyo distro kuti ikuteedzere nekutora chete ubuntu-hushoma
Ubuntu haina kugadzikana, ivo vanongoitira hanya nezvekuimisikidza TESTING, SABAYON, FEDORA, OPEN SUSE, CHAKRA hapana kana mumwe wavo anoita seanogadzikana kwandiri uye vese vanoita kunge vashoma kwandiri
Ubuntu makopi OS X. LIE Kubatana kwakafanana sei ne osx?
Ubuntu = Winbuntu FINALLY ...
Kudzokorora, kutsoropodza, kupa ... zvese izvi zvinorumbidzwa uye zvinodikanwa Asi Asi Kunyepa kana kutaura usina ruzivo kuyedza kugonesa vamwe nezvemaonero ako chinhu Chinokambaira mumaonero angu.
Ndanga ndichishandisa Linux kubvira 2000 uye Ubuntu ndizvo izvo vazhinji vedu takabvunza munguva idzodzo, zvese izvo Debian zvaitaridzika kuva uye zvisati zvamboitika, linux haina kumbobvira yashandiswa zvakanyanya padesktop uye Ubuntu ine zvakawanda zvekuita nazvo.
Zvingave zvakanaka kana tikaverenga chinyorwa chose tisati tapa maonero edu (ndinoreva, nekuti maonero ako haapesane neayo emunyori ... uye nekuda kwe «Rastrero»).
Nekuda kwaMwari, ndokumbirawo uverenge chinyorwa zvakanyatsonaka changamire, asi pedzisa uye ungadai wakachengetedza bile yako.
ndinobvumirana zvachose newe platonov
Kurudziro usati waisa maonero kurudyi uye kuruboshwe: VERENGA YAKAZARA NYAYA !!!
Ndinozviona sendakavhurika kune maonero evamwe vanhu maererano neUbuntu (kunze kwekunge kune vanonyanyisa vanonyanyisa ve distros, kunyangwe vaDebian ivo pachavo), ndichizadzisa zvinotaurwa naElav mune yake chinyorwa:
Ichokwadi, mune nyaya yeUbuntu haina basa nekudzosera basa rayo, zvirinani, kuDebian, ndiko kwavanovimba neLTS yega yega (kunyanya) kuti vagadzire distro yavo, yakaipa Ubuntu ... ..asi kweumwe Kune rimwe divi, isu tinoziva zvakakwana kuvhara kuri kuripo muDebian, vanoisa pfungwa zvakanyanya pavari vasati vagamuchira matsva ebasa, akaipa kuna Debian.
Zvinonzi Ubuntu haiteereri vashandisi, asi zvakafanana zvinogona kutaurwa nezvaDebian, uye Fedora zvakafanana (iyo distro yandaifanira kufambisa zvakanyanya), kune rumwe rutivi Ubuntu inobuda neshanduko dzakanyanya seUbatana, iyo yave iri Inonyanya kufarirwa, kune rimwe divi, kune vashandisi vasingade iyo yekudzokorora zvinodiwa kuti maDebian mapakeji anotambura, iwo muganho paranoia uye unoita mapakeji mazhinji anonoke kupfuudza kudzokororazve kakawanda (ingori kernel, yatove Ndakaedza nenzira yakagadzikana uye pasina matambudziko mu3.6.1, uye muDebian ivo havasvike pa3.3, uye kana iwe uchida kuisa 3.5 inofanira kunge ichibva kunzvimbo dzekuyedza); Fedora anga avewo anenge akanamatirwa nenharaunda kuti ivo havana iyo versionitis, kana zvirinani kuti nguva yekutsigira yakakura kudarika mwedzi gumi nematatu.
Iko kudzikama kweUbuntu, zvakashata iyo Ubuntu distros yakagadziriswa se "yekupedzisira", havatsanangure kuti ndezveUbuntu izvo iyo Testing vhezheni ndeyeDebian, yakasimba iyo LTS.
Ko kana ndisingade Ubuntu uye mazuva ano vari kundiita kuti ndibve pairi zvakare uye kamwe chete uye vese varegedze Gnome Classic uye vanyatsopinda muGnome Shell, ndeyekuti ivo vanokoshesa basa re "iro razvino vhezheni", ndiko kuti , izvozvi kuti 12.10 iri kubuda, ivo vakatarisana nekugadzirisa zvikanganiso zvinomuka, nepo kune rumwe rutivi, iyo yekuvhura pepa iri kuzadza nevanhu vanomira mudungwe kuti vave nezvinetso nezvirongwa zvinoshandiswa muLTS 12.04 yakagadziriswa… .. Havasi inofanirwa kupa pamberi peiyo vhezheni uye kwete iyo bvunzo vhezheni?
Huye, Ubuntu isarudzo yakanaka kwazvo, kwete yakanyanya kunaka kana yakaipa, munhu wese anozvigarisa kwaanonzwa kugadzikana, nekuti izvozvi handidi kumirira zvikanganiso muzvirongwa zveLTS kuti zvigadziriswe, kana kushandisa Betas .. kunyanyisa kugara wakamira kudzamara vobuda vhezheni yekupedzisira, senge 12.10,13.04,13.10,14.04 uye 14.10, kune izvo zvandinoda (izvo zvisiri izvo zvinoda vamwe) ndinofanira kuenda kusunungurwa, kana imwe vhezheni iyo inopa kukoshesa kune yayo yakagadzikana vhezheni uye kwete isingasviki pane bvunzo vhezheni.
Ndakaenda ndakarongedza, prox LTS ichave iri 14.04, iwo apfuura matatu ndiwo mabvunzo.
Vanhu ndapota verengai nyaya kanoverengeka ... zvinhu "semuenzaniso" zvandinotaura hazviratidze mafungire emunyori asi asi maonero aakaverenga obva ataura mafungiro ake achizviramba. Ini ndaifanira kuiverenga kaviri kuti ndibvumirane zvizere (nezuro ndakatsamwa: P)… Canonical ikambani uye ichidzokorora kushambadzira kweRedHat muna 2003 "haisi yeruzhinji rubatsiro". Kutenda kushambadziro yako, vazhinji vedu tiri kushandisa linux nhasi, zvingave zvakanaka kuve nekakutenda kune ino distro. Chinangwa chebuntu ndechekusvika kune wevashandisi vevashandisi nemabhizinesi, kwete kuve chekutambisa chema geek. Uye pamusoro peizvozvo, inozviitira mahara, unoziva kangani iyo inoyeuchidza RedHat kuti yakanga yawana nzvimbo iyoyo makore gumi apfuura uye yakabhadharwa (uye vangani vashandisi vakasiya kana kuenda kudebian kana fedora musimboti). Ndinovimba Canonical haiteedzere iyo nzira, ipapo kana iwe ukaona kukosha kweiyi distro. Zvakamboitika kare.
Zvinonakidza kuti mhando iyi posvo inogara ichitora sei vanhu kutarisa. Nepo vamwe vasina kana kutaurwa nezvazvo. Semuenzaniso, kana mumwe munhu akafunga nezve gnome2 vs mate kana iyo nyowani shell, zvakafanana! huwandu hukuru hwemashoko. Zvingave zvakadaro nekuti isu tinofarira kana zvine chekuita nevashandisi vezuva nezuva-veLinux? Zvisinei, mumaonero angu kunyanya, isu tiri munharaunda umo zvinhu zvese zvinofanirwa kukurumidza uye pasina nguva yekumira kuongorora zvinhu; nzwisisa zvakanakira nekuipira. Ini pachangu, ini ndakatanga mu linux kwete nekuti ini ndaida kuona chimwe chinhu chitsva kana nekuti ini ndaive ndakaguta nema windows; kungoti nekuti basa rangu raida kudaro. Ndinoyeuka pandakatanga muLinux yangu yekutanga distro yaive openuse 10.2, ini ndanga ndatoona kuti Ubuntu yaive yakanaka kwazvo kune vashandisi vevashandi. Nekudaro, pane ese ma distros, iyo yega yaive isina matambudziko pakuisa kana panguva yekuisirwa palaptop yangu yakavhurwauseuse 10.2, gare gare pandakachinja laptop ndakaenda ku debian, ku ubuntu kusvika ndaoneka kubatana, ndakaenda ku LMDE , ndakarwadziwa nenhamba yekuvandudzwa mushure mega gadziriso pack yandapedza naKubuntu 12.04. Saizvozvo, ini ndakaisa Ubuntu kune vamwe vandaishanda navo, zvinoenderana neizvi nekuti zviri nyore kushandisa, mashoma matambudziko ane hutachiona, uye gare gare vanoisiya, nekuda kwekuti ivo havana kujaira sisitimu uye havana nguva yekudyara kudzidza nezve it. Nekudaro, kana Ubuntu kana imwe distro yakanaka kana yakaipa, ingave kana kwete ichikonzera kuchikonzero ichocho, mhinduro (trite ndinoziva) inoenderana nerudzi kana zvido zvemushandisi wekupedzisira. Pakupedzisira kuzivikanwa kwangu kumunyori wepositi.
Ini handizvide, kubvira vhezheni 11.04 haina kumbobvira yandifambira zvakanaka uye chimwe chinhu chagara chakunditadza uye ndisingataure mashandiro asina kunaka ayo compiz anondipa, chinhu chega chakaponesa kubuntu.
Ummm, zvakanaka, iko kunogara kune monopoly uye simba nemabatanidzwa makuru hapana chingave chisingakwanisike mubhizimusi remakomputa.
PS: Ini pachangu handidi ubuntu zvachose, kunyangwe yangu yekutanga kuonana ne linux yaive ne ubuntu vhezheni 8.04
Ubuntu (vamwe) havaifarire nekuti inozivikanwa. Uye zvazviri, zvisarudzo zvavo zvinokudzwa nekuti zvinogona kureva shanduko mune vamwe. Vari kukanganisa? Ehe, sezvatinoita tese. Makore mashoma apfuura kushandisa ubuntu kwaitonhorera. Sezvo izvozvi unogona kushandisa zvese pichiblás, icho chinhu ndechekuti ini ndakapfuura ipapo ndikamhanya. Ini ndinoshandisa ubuntu, ini ndinoshandisa debian, ini ndashandisa openuse, vamwe ini ndakaedza kugadziriswa, uye ini ndakavada vese. Ini ndaigara ndichigona "kugadzira" muchina wangu kubva kune yega yega, zvinova ndizvo zvandaida.
Ini zvakare ndinofunga kuti nharaunda yevashandisi yakavhiringika nenharaunda yevagadziri uye ndosaka paine matambudziko. Vashandisi vane simba rakakura kusarudza chimwe chinhu, uye izvo zvinonzwika kubva kumaligi.
Makorokoto pachinyorwa ichi. Zvese zvinoratidzwa nenzira kwayo uye ndinobvumirana nemaonero emunyori. Kunyangwe ini ndaisakwanisa kuramba kuwedzera yangu.
Ndakaedza Ubuntu sedhiri rangu rekutanga pandakaunzwa kuGNU / Linux (ndinobva kuWindow $), uye ikozvino, kuti ini ndaedza kutenderera masere distros, Kubatana kunoratidzika kwandiri sedesktop yakanaka uye zvirinani kuti ndinoifarira, yakaipa chinhu ndiDash kuruboshwe, ini handizvifarire, ini ndinogara ndichiisa tafura yangu seiyi: kumusoro kwepaneru uye pasi padoko, izvo chete (uye dzimwe nguva Conky)
Ehezve Ubuntu haisi iyo desktop chete, uye kana usingaifarire, une idzi dzimwe nzira:
Ubuntu 10.04 (tora mukana wekuguma kwerutsigiro muna Kubvumbi gore rinouya)
Kubuntu (ini ndaisada KDE hazvo)
Xubuntu (Ndiri kurodha pasi izvozvi)
Lubuntu (featherweight shasha)
Ndiri kudzokera kuUbuntu (zvimwe saXubuntu) nekuda kwematambudziko angu akasiyana naDebian, haisi distro yakaipa, asi mamwe mapakeji anoshaikwa uye Waini (ini ndinowanzo kutamba) yanga isingashande zvachose.
Asi hei, yevaravara rwevara.
Chinyorwa ichi chakanyanya kunaka, ndakaiverenga zvachose uye ndinogovana pfungwa yechinyorwa, ini handisi musayendisiti wemakomputa kana chero chinhu chakadai asi ndinoda kuverenga uye kugara ndichiedza kudzidza zvishoma zvezvose, ini ndakatanga mu linux world neU-10.04 lts kubva pakutanga uye ini ndakatyora huropi hwangu kutanga ndatsvaga maitiro ekubatanidza yangu mbozha Brand kuti ndikwanise kushandisa internet uye zvaifadza chaizvo kuzviita, pamwe chimwe chinhu chisina basa kwauri asi kwandiri icho chakabva kune chinotevera , inotevera uye yekupedzisira icho chaive chinhu chakanakisa uye ipapo ini ndakazvipira kuti ndifunde hafu kushandisa iyo terminal uye ndikadzidza izvo zvekutanga. chokwadi ndechekuti ubuntu ndiko kupinda kwangu ku linux world uye ndinofara kwazvo kuti ndafunga kuyedza chimwe chakasiyana neicho vanhu vajaira.
Ndakaedza kushandisa slax handirangariri kuti ndeipi vhezheni asi raive gore rapfuura ndinofunga raive 6 asi ndakasiya nekuti handina kukwanisa kubatanidza modem yangu mbozha ndikadzokera kuUbuntu na10.04, asi ndaida kuziva kuyedza debian uye ini ndakadzora iso yeinenge 500mb uye yaive ini ndakaisirwa uye ndisina nharaunda kana chero chinhu munhu pa twitter akandiudza kuti ini ndasarudza zvisirizvo kurodha pasi uyezve chinhu chimwe chete chakaitika kwandiri ne arch saka ndakarega kuseka uye kurodha pasi ubuntu 11.10 Kusvikira mazuva mashoma apfuura ndakafunga kushandisa kubuntu kwe KDE ruzivo rwangu ne ubuntu rwanga rwakanaka sezvo ndiri mushandisi wewebhu, chat, mimhanzi uye nezvimwe zvakadaro uye ndine zvese zvandinoda. Asi ini ndinofarira kuziva, kune akawanda ma distros andiri kuda kuyedza asi handizive kana ndichigona kubatanidza BAM yangu mobile brand modem kune vese uye ndagara ndichiiridza zvakachengeteka.
Ini handipinde mumakakatanwa ekuti kana ubunto huri nani kana hwakaipa kupfuura zvandinoziva icho, chokwadi ndechekuti ini handifarire zvandiri kuda kudzidza uye kunzwa kugadzikana neUbuntu kana kumwe kugoverwa nekuti pakupedzisira ini ndicharamba ndiri chikamu cheGNU mushandisi nharaunda / LINUX uye ndicho chinhu chakakosha. Kwaziso uye ini ndinogara ndichiaverenga, zvinoita kunge inonakidza blog.
Ini ndakatanga Linux neUbuntu, mune vhezheni 7.10 kuti ive chaiyo uye ndinofanira kureurura kuti pandakazosvika pakuziva Linux ndanga ndichisiya iyi distro zvishoma nezvishoma (kuisiya zvachose mu10), kune vamwe vane kugadzikana kukuru uye kunonamira zvimwe kune zvandinoda (kuita kupfuura zvese).
Kunyangwe zvichikosha kwazvo kusimbisa kuti zviri pachena kuti mumwe nemumwe wedu ane zvido zvakasiyana nezvaanoda uye sekutaura kwaElav; Zvese zvinotaurwa pano zvinogona kuwanikwa mune dzimwe nzvimbo zhinji uye zvakatotaurwa nenzira isina kukodzera. Saka zviripo inzira inoremekedzeka kwandiri uye nemapoinzi akasimba asingatuke chero munhu.
Pindura kuna Alrep
Vanhu vazhinji vanovenga nekuti yakasvika pakuzivikanwa uye haina kuita sepasi pevhu sepakutanga
Iyo nharo yekuti kana zvirizvo uye kuteedzera kudaro, uye kuti kana ichokwadi kana zvisiri zvinoita kunge zvakapusa kwandiri. Izvi zvinoita sekunge kambani inogadzira midhudhudhu yakasununguka ichishandisa iyo nyowani mudhudhudhu pfungwa nekuti imwe kambani haigone kusimudzira chigadzirwa chayo mune icho chinhu futi? Zviripachena kuti ichaita chimwe chinhu zvakasiyana asi ndizvo izvozvo isu tinokunda vashandisi xD uye isu tinonyunyuta ??? Kana ivo "vachikopa" zvinhu zvinobatsira vashandisi, iko iko kunetseka kuri dambudziko? Kunyanya fanboyism kupfuura chero chinhu chipi zvacho chandinofunga
Munyika ino yerusununguko, munhu wese anokwanisa kushandisa zvaanoda, kwandiri ini ndinofarira madhinari madiki asi handicho chikonzero nei ndichitsoropodza dzimwe nharaunda. Izvo zvinofanirwa kutariswa pfungwa yemunharaunda uye sezviri pachena Kubatana neGnome 3 hazvipedzisi kugamuchirwa zvakanaka.
Ini ndinofunga Ubuntu kugovera kukuru, zvinoita kuti zvinhu zvive nyore kuti kune vamwe zvinogona kunetsa, kune vanhu vasina nguva, asi kana iwe uchida kuve neyakanaka system ... iyo zvakare inokutendera iwe kuti uvandudze software sooooo nyore uye pamusoro peizvozvo, zvese izvi zviri nyore Uye kana zvisiri, une nharaunda yakakura kuseri kwako, chii chimwe chaungabvunze kuti upinde muLinux nyika? Ipapo rimwe nerimwe rinosiya kana kugara kana kunatsiridza, semuenzaniso ini ndinoisa tsanga 3.6 mune chero Ubuntu uye ini ndinoona system yangu ichibhururuka, nenzira iri nyore futi, pachinzvimbo nevamwe ndinofanira kuibatanidza neinosemesa uye kukundikana kwayo kuenderera kwekusaita nemazvo zvachose ... nezvimwe.
Pasina mubvunzo Ubuntu haisi iyo yakanakisa maererano neicho chakasarudzika, asi ini ndinofunga kuti padanho repamusoro rinofukidza zvakawanda zvezvinoshandiswa nevashandisi vane svikiro-yepamusoro nhanho vanoda muzuva redu nhasi, kunyaradza, kuita, kumhanya, uye yakawanda ruzivo kana iwe uchida kudzamisa
Chii chakashata nekubatsira? Ngatiregei kuvhiringidza yemahara software nemahara software nekuti zvinhu zviviri zvakasiyana zvachose.
Linux yaizovei isina Ubuntu? Pamwe hapana aizoishandisa uye yaizonyangarika, munhu wese akambove paWindows, vozotamira kuUbuntu, kana izvo zvaunoda kusarudzira zvachose Linux OS, nzira yakanakisa kushora iyo distros izvo zvinoita kuti shanduko kubva kuWin kuenda kuLinux ive nyore, uye munyika ino mhando iyi ye "smartass" yakawanda
Pamberi peUbuntu, Linux yainge yatove nemukana wakakura mukurwira maseva, kwaitove nekuparadzirwa kwakadai seFedora, Debian, Slackware, Gentoo, Arch, Mandrake uye SUSE, uye paive nekuparadzirwa kuri nyore kumushandisi panguva yekuzvarwa kwaUbuntu. sezvayaive Lindows, Xandros kana Knoppix (iyo yekupedzisira ichiripo, asi yakanganikwa).
Nyika yeLinux inopfuura Ubuntu, asi zvakanyanya, zvimwe iri yega ndeimwe yevanoshandisa zvakanyanya, asi iri kure nekumiririra chikamu chakakura chevashandisi vese veLinux (Ndine chokwadi chekuti haina kana 20% yekupinda. , kunyangwe kusanganisira mabudiro ayo akaita seMint inozivikanwawo zvakanyanya).
Usatende kushambadzira kwakanyanya! 😉
Kukanganisa kumwe chete kunoitwa neavo vanokanganisa kugovaniswa kuve nyore uye vane hushamwari kunoitwawo nevamwe vashandisi 'vakangwara' vekuparadzira kuri nyore pavanoderedza vamwe vese vachizvitenda kuti ndivo nzvimbo yepasi. Nyika iyo, sezvavakatsanangura kare, yaivepo uye yanga ichikura kubvira Ubuntu isati yaonekwa.
Dambudziko neUbuntu hakusi kuti rinonyepedzera kuve nyore, asi zvimwe zvinhu zvakawanda zvakaremerwa munzira, mafungiro anotora kunharaunda uye chigadzirwa chekupedzisira chakatangwa panguva chaiyo mwedzi mitanhatu yega inoita kuti chibude nepakati pedza uye uve unorwadza sezino rinorwadza kakawanda. Ini handizoshamiswa kana, nekuda kweUbuntu, vanhu vazhinji vawana mufananidzo wakashata weGNU / Linux kupfuura avo vawana mufananidzo wakanaka.
Ini ndinobvumirana zvizere nemaonero ako maererano neUbuntu. Ndakatanga muLinux nyika neUbuntu uye kubva ipapo ndakaenderera mberi kuyedza kumwe kugoverwa .deb uye .rpm. Mukupedzisira ndakagara paDebian iyo yandakave ndakanyatsogadzikana nayo. Iye zvino ndachinjira kuCentos 6.3 yekusimba kwayo, rutsigiro ruzere kusvika 2017 uye rutsigiro rwekuchengetedza kusvika 2020, Gnome 2 uye 100% RHEL inoenderana. Chokwadi chakandikurudzira kwete pane yangu server chete, ndiri kuishandisa pane desktop yangu uye laptop uye ini handina kumbove nedambudziko nevatyairi.
Ona yangu yekumisikidza posvo uye ini ndinoikurudzira zvakanyanya:
Ndatenda .. inonakidza chinyorwa chenyu 🙂
Chokwadi ndechekuti ichi ndicho chimwe chezvinyorwa zvishoma apo vanhu vanotaura chaizvo, vachibvumirana zvizere pane yega yega mapoinzi akurukurwa.
Thanks Diego ..
Zvakanaka, iniwo handizive kuti sei asi ini handidi iyo disstro, sezvo ini ndisingazvide zvachose, ichave nekuti pandakaiisa (ubuntu, kubuntu), yakandipa yakaipa pfungwa, nekuda kwekunonoka kwayo uye nekuda kweiyo yakaipa gnome 3 desktop, uye Pamwe nekuti zvakanaka ndinofunga haifanire kunge iri inonyanya kufarirwa, openuse uye mandriva yakandisiya ndakashamisika, iwo akanaka kwazvo kugoverwa uye ari nyore kushandisa, ndinokurudzira openssuse 100 %, ipapo ini ndakaisa mapurogiramu ese andaida, uye zviri nyore.
zvakare yakavhurika suse yakaiswa nekukurumidza uye cd yake yekurarama yakakwana, iyi distr. Inotakura nekukurumidza uye inovhara nekukurumidza, ndinovimba ndinoikurudzira uye kufambisira mberi mukurumbira wayo.
Bill Gates neMicrosoft ... ngano, ngano uye nezvimwe